Industrial AHU bụ ikuku njikwa akụrụngwa nke e mere dị ka kpọmkwem oru ngo mkpa, na jikọtara na obi jụrụ, kpo oku (mmiri / uzuoku / gas ọkụ wdg), humidifying / dehumidifying (uzuoku / ịgba / wheel wdg), ikuku-ọcha (ịsa / filtration / electrostatic wdg), ike mgbake, na ụfọdụ mkpa ọrụ ike ezigbo ụlọ ime ihu igwe ka afọ ju mmepụta teknuzu usoro mkpa nke ulo oru omumuihe.
Holtop anọwo na-etinye onwe anyị na ulo oru ụlọ ikuku àgwà ngwọta ruo ọtụtụ iri afọ nke afọ si unit imewe, n'ichepụta, factory tupu nzukọ na ule, mbupu, na saịtị echichi, nyere, ọzụzụ na mmezi. Anyị na-enye mgbanwe nhọrọ imezu ihe ndị chọrọ gị n'ichepụta owuwu ma ọ bụ usoro. Anyị nwere 50B, 80C, 80B usoro maka ikike dị iche iche.
Nke gara aga: Ihe nhicha ikuku na arụ ọrụ disinfection
Osote: Okpomọkụ Iweghachite Ikuku Ijikwa Units